Heavy Metal music နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိကောင်းစရာ အကြောင်းအရာများ
၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခွေးမျိုးစိတ် ၁၀ ခုအကြောင်း
ခွေးတွေဟာ သူ့ရဲ့သဘာဝအရ သစ္စာရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းက သစ္စာရှိတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ အိမ်မှာထားဖို့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ါကြောင့် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ခွေးမျိုးစိတ် 10 မျိုးကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးမျိုးတွေကို ရှာဖွေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။...
ချစ်သူများနေ့ကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် Romantic ဆန်ဆန် ကျင်းပဖို့နည်းလမ်း ၅ ခု
Vday နေ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ချစ်သူတွေအချင်းချင်း လက်ဆောင်တွေဖလှယ်တာ အပြင် ချစ်ခြင်းတွေဖလှယ်တာကြတာက ပုံမှန် ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ လူတစ်ချို့ကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ပန်းစည်းတွေ suprise တွေလိုချင်တာမဟုတ်ပဲ နှစ်ယောက်ထဲ အမှတ်တရတစ်ချို့ကို ဖန်တီးချင်ကြပါတယ်။ အကောင်းစား ပိုက်ဆံအိတ်တွေနဲ့ အကောင်းစား cosmetic တွေ လက်ဆောင်တွေက တစ်ကယ်ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ အရေးမပါပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံတွေ ဖန်တီးဖို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေပဲ...
ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားသော သင်မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများ
ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးလည်း ကြည့်ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကုန်ရတာနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေနဲ့ တွေ့မှာကြောက်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ ရွေးချယ်ပေးပါရစေ။ ဇာတ်လမ်းတွေက သင်ကြည့်ဖူးပြီးသားတွေဖြစ်နေမလား မသိပေမယ့် ကြည့်ပြီးရင်တောင် ပြန်ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို အခြေခံထားပြီး စွဲမက်ဖို့ကောင်းသော အမြင်အာရုံတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လှည့်ကွက်တွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်အဖြစ်လည်း အကောင်းဆုံးပြန်လည်ဖန်တီးထားကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Lost Girls (2020) Lost Girls...
သင့်ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပြေပျောက်စေဖို့ သင့်စိတ်ခံစားချက်အလိုက် အနုပညာကုထုံး(၁၅) ခု
စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးတာတွေနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေကို ခံစားနေရလား? အနုပညာကုထုံးကို စမ်းသပ်ရမယ့်အချိန်ကို ရောက်လာပါပြီ။ ပုံဆွဲခြင်း (သို့) ပန်းပုထုခြင်းကဲ့သို့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ သိသာထင်ရှားသော ကုထုံးနှင့် ကုသခြင်းးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပြီး ခက်ခဲသော ခံစားချက်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ စကားတစ်ခွန်းမှာ မပြောဘဲ သင့်ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သင်ဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီက ရုပ်လုံးပေါ်ဖို့ မလိုသလို...
Break it ဗားရှင်းမှာ comeback ပုံတွေအနေနဲ့ wild sides တွေကို ပြသခဲ့သော Twice အဖွဲ့ဝင်များ
Twice အဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့ရဲ့ 'Formula of Love: O+T=<3' concept ပုံတွေကို wild sides ပုံစံမျိုး ချပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာမယ့် 'Break It' ဗားရှင်းဓာတ်ပုံတွေအတွက် Twice အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အချစ်အကြောင်းအတွင်းကျကျလေ့လာရာကနေ စိတ်ထားတွေပျက်စီးသွားသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပုံဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ၃ ခုမြောက်အယ်လ်ဘမ်အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာမယ့် 'Formula of...
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပရိတ်သတ်တွေကြား ရေပန်းစား ခေတ်စားနေတဲ့ Squid Game ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်း အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ“Squid Game”ဇာတ်လမ်းက တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဇယားထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သင်မသိသေးတဲ့အချက် (၉)ချက်ရှိပါတယ်။ ၁။ ဖုန်းနံပါတ်က အမှန်ဖြစ်ပါတယ် Squid Game ရဲ့အစမှာ ကစားသမားတိုင်းက နောက်ကျောမှာ ဖုန်းနံပါတ်ပါရှိတဲ့ ပဟေဠိဆန်ဆန် ကဒ်တစ်ခုစီ ရရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့က...